Air Madagascar : Eric Koller, filohan’ny filankevi-pitantanana vaovao -
AccueilSongandinaAir Madagascar : Eric Koller, filohan’ny filankevi-pitantanana vaovao
01/12/2017 admintriatra Songandina 0
Mazava. Notendren’ireo mpikambana eo anivon’ny filankevi-pitantanana (PCA) eo anivon’ireo kaompaniam-pitaterana an’habakabaka roa Air Madagascar sy Air Austral ho filohan’izany filankevi-pitantanana izany i Eric Koller. Tafiditra indrindra amin’ny fanarenana ny kaompania Air Madagascar izany. Safidy tsara ho an’ireo mpanara-maso akaiky izany noho ny fahafehezany sehatra maro. Fantatra teo amin’ny tontolon’ny fizahantany teto Madagasikara, ary efa nilomano tamin’ny fikirakirana izany nandritra ny taona maro teto amin’ny firenena ity PCA vaovaon’ny Air Madagascar ity. Tsy azo hiodivirana mihitsy eo amin’izany sehatry ny fizahantany eto Madagasikara izany ny tenany noho ny traikefa sy ny fifandraisany amin’ireo firenena vahiny maro, sns.
Ankoatra izay, dia tontosa soa amantsara ny fifanaraham-piaraha-miasa “Closing” eo amin’ireo kaompania roa, Air Madagascar sy Air Austral. Ny minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola, ny minisiteran’ny Fitaterana sy Famantarana ny Toetr’andro ,ary ireo Filoha tale jeneralin’ny Air Austral sy Air Madagascar no indray nanao fifanaovan-tsoniam-pifanarahana amin’ilay “Closing”. Afaka manatanteraka ny fanovana amin’izay ny kaompania Air Madagascar, izay vosoritry ny tetikasam-panarenana voarakitry ny Business Plan.
Manamafy ary manaporofo ny fanafoanana sy fanadiovana ny trosan’ny kaompania Air Madagascar ity fifanaovan-tsonia farany tamin’ireo dingana nolalovana nisy teo amin’ireo tompon’andraikitra voalaza etsy ambony ireo. Eo ihany koa ny fandrotsahana ny ampahany amin’ny renivolan’ny Air Austral. Nampahalalan’ny filoha tale jeneralin’ity kaompania vahiny miara-miasa amin’ny Air Madagascar ity, Marie joseph Malé, fa nandrotsaka vola mitentina 10 tapitrisa Dolara amin’ny 40 tapitrisa Dolara ny kaompania tantaniny.
Eo amin’ny drafi-panovana indray, mbola ireo asa tsy maintsy tontosaina sy tanterahina ho amin’ny fanarenana ny Air Madagascar, raha ny nambaran’ny tale jeneraliny. Tafiditra indrindra amin’ny Business Plan amin’ny fanarenana, ohatra, ny fandraisana sy fampidirana mpanamory miisa 27 mba ho fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika. Eo ihany koa ny fampandehanana ireo fiaramanidina, izay tsy mihetsika, an’ity kaompaniam-pitaterana an’habakabaka nasionaly ity. Ho an’ny taona 2018, dia mieritreritra ny hamerenana amin’ny sidina ireo fiaramanidina roa Airbus A340 miisa roa ny eo anivon’ny Air Madagascar ,ary mba hamenoana ho efatra ireo fiaramanidina miandraikitra ny sidina “Tana-Paris-Tana” sy “Marseille-Paris-Tana”. Notsiahivin’ny tale jeneralin’ny Air Madagascar, fa amin’ireo fiaramanidina miisa 11 an’ity kaompania tantaniny ity, ny dimy amin’ireo ihany no manatanteraka sidina ara-dalàna. Noho izany indrindra, raha ny nambarany hatrany, hafainganina ny asa rehetra mahakasika ny fanarenana.